WEIMARANER ALIKA FAMPAHALALANA SY SARY - ALIKA
Shorthaired ary Longhaired
Udo the Weimaraner amin'ny 2 1/2 taona
Lisitry ny alika mifangaro Weimaraner
Alika mpitari-dalana Weimaraner
Ny Weimaraner dia alika antonony, atletisma ary miasa. Ny loha salantsalany dia manana fijanonana antonony miaraka amin'ny tsipika medaly midina amin'ny handrina. Miloko ny orona ary miha-moka ny nifiny. Ny maso somary mivelatra dia tonga amin'ny aloky ny amber, volondavenona na volondavenona manga. Ny sofina avo lenta dia lava sy pendant, aforitra mandroso ary mihantona manaraka ny sisin'ny loha. Ny tongotra eo anoloana dia mahitsy miaraka amin'ny tranokala, tongotra mifatotra. Ny rantsan-tongotra dia miloko fotsy na amber. Atao mahazatra ny rambony amin'ny 4 ½ santimetatra rehefa vita ny alika roa andro. Naoty: tsy ara-dalàna ny rambon'ny docking amin'ny ankamaroan'ny faritra eropeana. Matetika dia esorina ny lalàn'andriamanitra. Misavoana moramora midina avy eo an-tsoroka mankany amin'ny rump ilay topline. Ny palitao fohy sy malama dia tery amin'ny vatana iray manontolo ary tonga amin'ny aloky ny volondavenona hatramin'ny volondavenona, mifangaro amin'ny aloky ny maizina amin'ny vatana ary alokaloka maivana kokoa amin'ny loha sy sofina. Izy io koa dia tonga amin'ny karazana longhaired lava (FCI Group 7). Ny alokaloka volondavenona rehetra dia ekena. Indraindray misy marika fotsy kely eo amin'ny tratra.
Ny Weimaraner dia faly, be fitiavana, manan-tsaina, falifaly sy be fitiavana. Tsara amin'ny ankizy izany. Raha tsy misy ny fampihetseham-batana mety dia ho feno rambolo ary sarotra fehezina. Mianatra haingana ity karazany ity fa ho leo kosa raha ny fiofanana dia zavatra mitovy hatrany hatrany. Ity karazana ity dia mila fiofanana mafy orina sy za-draharaha manomboka amin'ny alika kely, miaraka amin'ny tompona izay mahatakatra ny fomba a mpitarika fonosan'ny alika , na mety hanjary ho maditra sy fanahy iniana izany. Raha tsy misy io fitarihana mety io dia mety ho lasa mpiady amin'ny alika hafa. Ity alika mpihaza ity dia manana toetra voajanahary haza mahery ary tsy tokony hatokisana amin'ny kely biby tsy kaninina toy ny hamsters , bitro SY kisoa ginea . Nifaneraserana tsara miaraka amin'ny olona, ​​toerana, zavatra ary biby hafa. Mahery fo, miaro ary tsy mivadika, Weimaraner dia manao mpiambina sy mpiambina tsara. Weimaraners maniry mafy ny hitarika. Tian'izy ireo ho fantatra izay antenaina amin'izy ireo sy mandra-pahoviana. Raha tsy atao mazava tsara hatrany izany dia tsy ho marin-tsaina izy ireo, mety hamafisina, mety hiteraka fitaintainanana misaraka, ho lasa manimba sy tsy milamina. Ny tompon-trano dia tsy tokony ho henjana, fa milamina amin'ny rivotra voajanahaky ny fahefana amin'ny fitondran-tenany. Ilaina ireo zavatra ireo raha te hanana fifaliana, ny fitondran- , alika mahay mandanjalanja. Omeo fanatanjahan-tena be dia be ny Weim, raha tsy izany dia ho tony be izy ary faly be loatra. Satria feno hery be ity karazany ity, ny zavatra voalohany mila ianarany dia fitorevahana . Hanampy izany sorohy ny mitsambikina , satria alika mahery io ary handona ny be antitra na ny zaza tsy nahy. Ity karazana ity indrindra dia tsy tokony hohenjanina amin'ny famaizana, satria mora mitandrina izy ireo. Raha vao misy tahotra olona / zavatra iray dia mitady hisoroka izy ireo ary sarotra ny fampiofanana. Tena dodona izy ireo hampifaly sy handrisika ny valisoa (sakafo na fiderana) ka raha vao misy fika ianarana, dia hitsambikina ny alika hamerina hidera. Na dia, diso hevitra matetika aza izy ireo ho moana, satria manana fifantohana toy izany izy ireo, raha tsy ny hafetsena na ny fangatahan'ny tompony no ifantohany amin'izay fotoana izay, dia tsy hitranga izany! Mandany fotoana be dia be amin'ny mandeha an-tongotra fohy , eo akaikinao. Raha avela hihazakazaka mialoha ny Weimaraner dia hisintona toy ny lamasinina ary manomboka mino fa alpha izy, satria ny mpitarika pack dia mandeha aloha. Tia mihombo ity karazany ity, ary mila ahitsy raha lasa be loatra. Tena mafy orina, miaraka amin'ny fofona maimbo, ary mpiasa mazoto, ny Weimaraner dia azo ampiasaina amin'ny karazana fihazana rehetra.
alika kely afangaro amin'ny bulldog sy pitbull
Haavony: Lehilahy 24 - 27 santimetatra (61 - 69 cm) Vehivavy 22 - 25 santimetatra (56 - 63 cm)
Milanja: Lehilahy 55 - 70 pounds (25 - 32 kg) Vehivavy 50 - 65 pounds (23 - 29 kg)
Mora volo tsara kokoa ny manome sakafo kely na roa na telo isan'andro azy ireo fa tsy sakafo lehibe iray. Mety ho mora voan'ny hip dysplasia sy osteodystrophy hypertropic (fitomboana be loatra). Mora resahina koa fivontosan'ny sela .
Weimaraners dia hanao tsara ao amin'ny trano iray raha toa ka ampy ny fampiasan'izy ireo. Tsy mihetsika izy ireo ao an-trano ary hanao tsara indrindra amin'ny tokontany malalaka farafaharatsiny. Tsy mifanaraka amin'ny fiainana kennel ivelany izy ireo.
Alika miasa mahery ireo ary manana tanjaka lehibe. Mila raisina izy ireo a mandeha isan'andro, mandeha lavitra na jogging. Ho fanampin'izay, mila fotoana betsaka handosirana malalaka izy ireo. Aza manao fampiharana azy ireo aorian'ny sakafo. Ny tsara indrindra dia ny mamahana alika rehefa mandeha lavitra, raha vantany vao mangatsiaka izy.
10-14 taona eo ho eo
alika kely bulldog shar pei mix dog for sale
Ny palitao malama sy lava volo dia mora hitazonana ny toetrandro avo indrindra. Borosio amin'ny borosy borosy mafy, ary ny shampoo maina indraindray. Mandroa amin'ny savony malefaka ihany raha tsy ilaina. Ny fikosehana amin'ny chamois dia hampamirapiratra ny palitao. Zahao ny tongotra sy vava raha simba aorian'ny asa na fanaovana fanatanjahan-tena. Ataovy tsara foana ny hoho. Ity karazana ity dia mpitrandraka antonony.
Efa an-jato taona maro ny karazany, nalaina avy amin'ny tahiry voafantina mitovy amin'ny karazany mihaza alemanina hafa ary taranaky ny Bloodhound . Ny Weimaraner dia alika mpihaza tsara rehetra ary mpanondro tsara. Tany am-boalohany izy io dia nampiasaina ho mpihaza lalao goavambe, serfa ary amboadia, fa ampiasaina ankehitriny kokoa ho toy ny birddog ary na dia retriever rano aza. Nisy Weimaraner niseho tamin'ny sary hosodoko Van Dyck tamin'ny fiandohan'ny taona 1600. Howard Knight, izay nanangana ny klioban'ny Amerikanina Weimaraner voalohany, dia nanafatra ireo alika tany Etazonia tamin'ny taona 1929. Ilay fandaharana amin'ny fahitalavitra malaza Sesame Street dia fantatra fa milalao tantara an-tsehatra amin'ity karazana mitafy akanjo olombelona ity. Ny Weimaraner dia neken'ny AKC voalohany tamin'ny 1943. Ny sasany amin'ny talentany dia misy: mihaza, manara-dia, mamerina, manondro, miambina, miambina, miasa polisy, serivisy ho an'ny sembana, mikaroka sy manavotra ary mailaka.
Gianni the Weimaraner toy ny alika kely amin'ny 3 volana mitsako hazo
'Panu zum Laubwald dia Weimaraner efa lava volo notontosain'i Dr. Hans Schmidt avy any Alemana. Antsoiko hoe Piezl izy satria PZL no anarany voalohany. '
mavokely toerana ny alika ny orona
Peyton May the Weimaraner ho alika kely
manga heeler basset hound mifangaro
Bodie the Weimaraner amin'ny 3 1/2 taona— 'Bodie dia Weimaraner 3½-taona. Tena mamy izy, nefa tena miaro. Zazalahy mavitrika izy ary tiany ny mihazakazaka sy milalao baolina. Alika masiaka be izy. Tena marani-tsaina izy. Nitsangana teo amin'ny latabatra izy indray mandeha ary nanokatra ny boaty Pop Tarts ary nanokatra ireo fonosana toy ny an'ny olombelona ihany. Tsy milaza izany aho hoe tsara, fa mahira-tsaina. Tiany koa ny matory eo am-pandriana amiko. Rehefa tsy matory izy dia any ivelany. Tiany koa ny mihinana. Navoakako ny vilia baolina ary mihinana haingana be daholo izy. Izy io dia bibikely fitiavana ary namana akaiky. '
Bodie the Weimaraner amin'ny 3 1/2 taona
Bodie the Weimaraner toy ny alika kely
Shelby the Weimaraner
Otto the Weimaraner ho alika kely amin'ny 6 volana
Volafotsy ny Weimaraner ho alika kely amin'ny 7 volana
Hijery ohatra hafa momba ny Weimaraner
Weimaraner sary 1
Weimaraner sary 2
Weimaraner Sary 3
Weimaraner Sary 4
Weimaraner Sary 5
sarin'alika alika kely pyrenees
Zavatra mpiandry ondry mainty sy Tan
huskies siberia volontsôkôlà sy fotsy
sarin'ny alika pitbull orona manga
sarin'alika alika kely pitbull